Ry vahoakan’i Brieville, fantatro fa manan-karena amin’ny kraoma ianareo eto. Ataoko ny fanamby fa ny harena izay ananareo ihany dia ahafahantsika mampandroso ny tanàna. Ho hamboarantsika ny hopitaly, ho ataoko manarapenitra, ireo lalàna mampijaly anareo tsy maintsy ho vitaintsika. Ho jereko manokana ianareo mpiasan’ny kraomita Malagasy ary tsy maintsy hisitraka ireo tombontsoa tokony hananareo ianareo. Tiako ianareo vahoakan’i Brieville. Misaotra tamin’ny fitiavana nasehonareo ahy ihany koa ary ny mbola ho ataonareo amin’ny 19 desambra izao.
Henoko ny hiakanareo, henoko ny fitarainanareo vahoaka teto Mandoto androany. Fantatro fa mila ahy ianareo. Nalain’ny olona ny taninareo, miaina anaty tsy fandriampahalemana ianareo, miaina anaty haizina. Nitsangana ho vahaolana ho anareo aho, hanampy anareo, hitondra anareo any amin’ny fahazavana. Ry vahoakan’i Mandoto, velirano no ataoko fa manana vahaolana aho hamorogorana ny tsy fandriampahalemana, ho averiko aminareo ihany koa ireo tany nalaina taminareo ary matokia ahy ianareo fa ny isan-tokantrano dia hanana fahazavana. Tiako ianareo, izaho koa tia anareo.
Mahaiza, distrikan’i Betafo
Lehibe ny fitiavako an’ny vahoakan’i Mahaiza matoa nandalo teto aho androany. Tsy mendrika anareo vahoaka eto ny hiaina anaty haizina, tsy mendrika anareo ny hiaina anaty tsy fandriampahalemana, tsy mendrika anareo ny hiaina anaty fiainana tsy zarizary. Hitsangana ho vahaolana ho anareo aho. Ampio aho amin’ny faha 19 ny volana desambra izao dia hiaraka hanovan’ny tantaran’i Mahaiza isika ary i Madagasikara iray manontolo.
Nandritrin’ny fandalovako teto Ambohimanambola dia tsapako fa mila ahy tanteraka ny vahoaka eto an-toearana. Mangetaheta fampandrosoana, mila fiovana. Efa nanolo-tena ho an’ny firenena aho ary hanavotra an’i Madagasikara no tanjoko. Ny kaomina Ambohimanambola ihany koa dia ahazo ny anjara fampandrosoany. Andao ary hiara-hifanome tanàna isika. Matokisa ahy ianareo fa ireo rehetra nambarako anareo dia tsy maintsy ho tanterahiko : hanampy ny tantsaha aho, ny tanora, ny vehivavy, ireo tsy an’asa rehetra ary hanana ny anjara fahazavany ihany koa Ambohimanambola.
Vahoaka maro ianareo no niandry ahy tao Betafo tamin’ity fampielezan-kevitra fihodinana faharoa ity na dia efa nihaona taminareo aza aho tamin’ny fampielezan-kevitra fihodinana voalohany. Tsapako tokoa fa tia ahy ianareo ary mangetaheta fampandrosoana. Hamafisiko ny velirano izay efa nataoko taminareo fa tsy maintsy mandroso ny distrikan’i Betafo. Ny hangatahiko aminareo dia ny hanamafisanareo ny fitiavanareo ahy ny 19 desambra izao. Rehefa lany filoha aho, avo folo heny ny fampandrosoana ho ataontsika eto Betafo.
Tsy diso fanantenana mihintsy aho raha nandalo tao amin’ny kaomina Vinaninony. Fantatro fa tantsaha avokoa ny ankamaroanareo vahoaka eto. Ataoko ny velirano aminareo eto Vinaninony fa hametraka orinasa mamokatra zezika aho ho anareo tantsaha. Ho fitsinjovako anareo ihany koa dia afaka tsy alohanareo ny vidin’io zezika io raha tsy miakatra ny vokatra. Hisitraka herinaratra ihany koa ianareo satria fantatro ary tsapako fa mijaly amin’ny resaka angovo ny Malagasy. Izay rehetra lazaiko tsy maintsy ho tanterahiko. Manome toky anareo vahoaka eto Vinaninony ihany koa aho fa tsy maintsy ho amboariko ny lalàna RN43, mampitohy an’i Vinaninony sy ny lalam-pirenena faha 7. Tsy maintsy tafita i Madagasikara.